Samsung Galaxy Note 8 ၏ပထမဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် Gadget သတင်း
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသင်နောက်ဆုံးမှတ်စုဟောင်းကိုအသစ်ပြောင်းလိုပါကယခုနှစ်တွင်သင်လုပ်ရမည့်အရာမှာစောင့်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်သည်၊ Samsung က Galaxy Note 8 အသစ်ကိုဖြန့်ချိမည် သူကစွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်ဖြင့်အလုပ်လုပ်နေပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ထပ် terminal အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
သတင်းအချက်အလက်များကိုလူသိများသော“ leaker” အီဗန်ဘလပ်စ်မှရရှိသည်။ သူသည်တွစ်တာတွင်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ်သည့်ကြီးကျယ်သောစပီကာ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအလွတ်သဘောဖြင့်ကြေညာရန်ဖြစ်သည်။ Samsung ၏ Galaxy Note 8 ကိုစက်တင်ဘာလတွင်အနည်းငယ်ယူပြီးယူရိုတစ်ထောင်ခန့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ “ မသွားရသေးဘူး၊ နောက်ထပ်လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်” ဟုသူပြောခဲ့သည့်အတိုင်းငြိမ်ဝပ်စွာနေပါ
1 Galaxy Note 8 ကိုခုန်ချခြင်း
2 လာမယ့် Galaxy Note 8 နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေသိထားလဲ
Galaxy Note 8 ကိုခုန်ချခြင်း
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး Samsung သည်နွေရာသီအလယ်တွင် Galaxy Note7ကိုစတင်ဖြန့်ချိခြင်းဖြင့်အိုလံပစ်အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကျရှုံးသမိုင်းဆိုင်ရာပြင်းအားဖြစ်ခဲ့သည်.
အမေရိကန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားကဲ့သို့သောနိုင်ငံများရှိ၎င်း၏ဇာတိမြေကိုစတင်ပြီးမကြာမီတွင်သုံးစွဲသူများသည်သူစိမ်းများကိုသတင်းပို့လာကြသည် ပေါက်ကွဲမှုနှင့် flash မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားမှု terminal များမီးတောက်လောင်ခဲ့ပြီးကျန်အစိတ်အပိုင်းများကိုလှုပ်ခတ်စေခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံယာဉ်များ၊ အိမ်များ ... အခြားပစ္စည်းများအားထိခိုက်စေခဲ့သည်။ အမှုပေါင်းများပြားလာခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အစားထိုးမည့်ဆိပ်ကမ်းများ၏ဆိုင်းငံ့ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည် အသစ်များနှင့်ပြproblemsနာများမရှိဘဲ။ သို့သော်ပြောပြီးပြုခဲ့သည်ကအလုအယက်သည်မကောင်းကြောင်းဒုတိယတင်ပို့သည့်နေရာတွင်ပြproblemနာဆက်ရှိနေသေးသည်ဟုသိရသည်။ အများပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောကြောင့်အာဏာပိုင်များအလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပြီး Galaxy Note7ကိုစီးပွားဖြစ်ပျံသန်းမှုတွင်ပင်တားမြစ်ထားသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ဆမ်ဆောင်းသည်၎င်း၏ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုအမြဲတမ်းအစဉ်အမြဲရပ်ဆိုင်းထားရသည်.
Samsung Galaxy Note7သေဆုံးသွားပေမယ့် Galaxy Note စီးရီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဖက်တွင်မူယခုနှစ်အစတွင်၎င်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည် Samsung ကတောင်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံတွေမှာ Galaxy Note7ကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားပါတယ် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 25% အားဖြင့်နိမ့်သောစျေးနှုန်းမှာ, လမ်း, စကားမစပ်, \_ t ဖြစ်ပျက်တော့မည်။ ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ချက်မှာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်သိုလှောင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများကို၎င်းတို့နှင့်အမှန်တကယ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိဘဲသိုလှောင်ထားရန်နှင့်ပျက်ကွက်သည့် terminal တွင်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြန်လည်ရယူရန်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်နေရာရာမှ Samsung သည်ပေါက်ကွဲနိုင်သည့် terminal ဖြစ်သော Galaxy Note 8 ကိုသဘာဝဆက်ခံသူအဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။Evan Blass မှသူ၏တွစ်တာပရိုဖိုင်းမှတဆင့်ပြုလုပ်သောစစ်ထုတ်ခြင်းကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည် @evleaks.
လာမယ့် Galaxy Note 8 နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေသိထားလဲ
အသုံးပြုသူများစွာကယူဆထားသည့်အတိုင်းလာမည့် Galaxy Note 8 သည်အောင်မြင်သော Galaxy S8 နှင့် Galaxy S8 Plus တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နေရသည့်အင်္ဂါရပ်အချို့ကိုအမွေခံရမည်။ အထင်ရှားဆုံးကတော့ဒီ Infinity Display မျက်နှာပြင်ရဲ့အယူအဆကိုလက်ခံခြင်းပဲ နှစ်ဆအဖြစ်များတတ် AMOLED panel ကို ၏အရွယ်အစားရှိသည်မယ်လို့၎င်း၏နှစ်ဖက်အပေါ် ၆.၃ လက်မနှင့် ၁၈.၅: ၉ အချိုး.
သို့သော် Galaxy Note 8 သည်ယခုအချိန်ထိ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့်အတူ terminal တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် S8 နှင့် S8 Plus နှင့်ဆင်တူသော်လည်း၎င်းသည်၎င်းတို့နှင့်ဝေးကွာရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ လူကြိုက်များပြီးသားပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်သာဖြစ်သည် S Pen, ဒါပေမယ့်လည်းaကဲ့သို့သောသတ်မှတ်ချက်များမှတဆင့် 12 megapixel sonor များနှင့် optical stabilization နှင့်အတူ dual- ကင်မရာ။ သူတို့နောက်မှာ flash နဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ fingerprint sensor ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည် S8 စီးရီးရှိလက်ဗွေဖတ်စက်၏တည်နေရာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော "အငြင်းပွားဖွယ်ရာ" ကိုအဆုံးသတ်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အတွင်းပိုင်း၌၎င်းသည်၎င်းတို့အားပေါင်းစည်းပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းသောစွမ်းအားဖြင့်အလွန်အစွမ်းထက်သော terminal ကိုတွေ့လိမ့်မည် Qualcomm Snapdragon 835 သို့မဟုတ် Exynos 8895 ပရိုဆက်ဆာများ (ငါတို့၌ရှိသောစျေးကွက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်) RAM memory ကို6GB အထိတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတစ် ဦး ကထောက်ခံခဲ့သည် 3.300 mAh ဘက်ထရီ.
ဒါဟာအစထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ် ကို virtual လက်ထောက် bixby ၎င်းစက်တင်ဘာလတွင်စက်တင်ဘာလ၌ခန့်မှန်းရန်မျှော်လင့်ထားသည်ထက်အနည်းငယ်မျှနောက်ကျသွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် iPhone model အသစ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ထိုရက်များ၌ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းက ၉၉၉ ယူရိုဖြစ်တယ်, ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုပရီမီယံကိရိယာတစ်ခုသာ။ ကြီးမြတ်မသိမသာကွဲပြားပေးခြင်း။
သို့သော် Blass ၏အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းသည်သူ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုအလေးအနက်ထားရန်ထက် ပို၍ ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဖိတ်ခေါ်ထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Samsung Galaxy Note 8 ၏ပထမဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်